Otu esi ebudata & Wụnye Ubuntu 21.10 Imish Indri - LinuxCapable
October 27, 2021 October 18, 2021 by Jọshụa James
Budata Ubuntu 21.10 Imish Indri Disk Image
Mepụta draịvụ USB bootable
Malitegharịa ekwentị PC wee banye ọnọdụ BOOT.
Wụnye Ubuntu 21.10 Imish Indri
Nhazi & Ntọlite ​​Oge Mbụ
Ubuntu ewepụtala Ubuntu 21.10 codenamed Impish Indri. Nke a ahụla iwebata GNOME 40 dị ka desktọpụ ndabara, ọ dịkwa nwute na GNOME 41 emeghị nke ikpeazụ. Ntọhapụ na-ewebata Linux Kernel 5.13 n'etiti ngwa ọhụrụ yana nkwalite arụmọrụ azụ azụ ndị ọzọ.
Ụfọdụ njirimara ndị ọzọ.
Nkuzi na-esonụ ga-agafe usoro ndị achọrọ iji mee nke ọma budata ma wụnye Ubuntu 21.04 Imish Indri, yana nseta ihuenyo gụnyere na mbọ niile enwere ike.
RAM: 1GB kacha nta / 4GB+ kwadoro
nchekwa: 8GB kacha nta / 16GB+ kwadoro
ngosipụta: Opekempe 1024 x 768 / 1440 x 900 ma ọ bụ karịa ka akwadoro
Mgbasa ozi bootable: DVD-ROM / bootable USB mbanye
Ọrụ mbụ bụ ịga na saịtị gọọmentị na budata ụdị desktọpụ ahụ nke Ubuntu 21.10 Impish Indri site na ịga na ibe nbudata.
N'aka nke ọzọ, ị nwere ike ịga na Ubuntu ibe nbudata CD Mirrors gọọmentị. Nke a nwere ike ịbawanye ọsọ nbudata site na nbudata ihe oyiyi Ubuntu site na ebe dị gị nso.
Mara, ọtụtụ obodo nwere enyo. Ọ bụrụ na ọ bụghị, họrọ ebe kaboodu.
Nzọụkwụ ọzọ mgbe ị ebudatara nhọrọ nke Ubuntu 21.10 disk oyiyi bụ ịmepụta ya ka ọ bụrụ eriri USB nke nwere ike ịga n'ihu na nrụnye. Ugbu a, ọtụtụ nhọrọ dị na Rufus ma ọ bụ BalenaEtcher. Nkuzi a ga-eji balenaEtcher n'ihi na ọ bụ n'efu, kwadoro nke ọma, yana kwụ ọtọ. Uru ọzọ bụ na a na-akwado mmemme ahụ Windows, Mac OS, na Linux.
Nke mbụ, gaa na ibe nbudata wee budata ụdị kachasị ọhụrụ dabara na sistemụ arụmọrụ gị.
Ọzọ, wụnye ngwa. Maka ndị ọrụ Windows na MacOS, usoro nrụnye dị mfe yana akpaaka. Maka ndị ọrụ nọ na nkesa Linux dị ugbu a, ọ dị ntakịrị mgbagwoju anya. Budata ebe nchekwa .zip wee wepụ faịlụ ahụ, hapụ gị folda. Tinye folda a wee pịa onyoonyo ngwa.
Nkesa Linux dị iche iche nwere ike ịdị ka nke ọzọ "gbaa" dochie anya "emeghe,” ma n’otu ụkpụrụ ahụ. Ọzọkwa, a pụrụ itinye ngwá ọrụ a site na iji ebe nchekwa dị iche iche, ma maka nkuzi nkuzi, a na-egosi naanị usoro ntuziaka.
Ozugbo i meghere balenaEtcher họrọ flash si faịlụ:
Họrọ onyonyo Ubuntu 21.10 ebudatara, wee gaa n'ihu họrọ ebumnuche ịchọta mkpanaka USB wee kụọ ọkụ.
Ogwe ọganihu ga-egosi. Ọtụtụ mgbe, dabere na ọsọ nke USB, usoro a na-ewe 1 nkeji na 5. Usoro kwesịrị ịgafe ngwa ngwa, na ngosi ga-apụta na USB na-renamed. N'okwu a, aha USB na-ewe mgbe ubuntu 21.10.
Nzọụkwụ ọzọ bụ itinye USB n'ime PC ezubere iche wee gbanye ya. Ụfọdụ PC ewepụtala hotkeys iji malite na USB, mana nke a na-arụ ọrụ, ma enwere ọtụtụ ụdị dị iche iche. Ihe na-egosi na ị ga-enyocha ihe mere na modul gbasara nbudata site na draịva bootable.
Ndụmọdụ ọzọ dị mma na-abụkarị F1, F2, F10, F11, ma ọ bụ F12 nwere ike iduba na ntọala buut, ma ọ bụrụ na ọ bụghị bios, wee gbanwee usoro buut. Ụfọdụ aghụghọ ndị nwụrụ anwụ setịpụrụ mfe. Ndị ọzọ gbagwojuru anya, ọzọ hụ na ị ga-ebu ụzọ mee nyocha.
Ozugbo ị nwetara diski buut, ị ga-abata na menu buut GRUB. Ọtụtụ ndị ọrụ ga-ahọrọ nhọrọ nke mbụ. Nke abụọ dị mkpa naanị ma ọ bụrụ na ị na-enwe nsogbu na ihe nrụnye eserese. Ọ bụrụ na nke a emee, malitegharịa PC wee họrọ nhọrọ nke abụọ.
01. họrọ "*Ubuntu" ma pịa Tinye igodo na keyboard gị.
02. Nnabata – Họrọ “Wụnye Ubuntu” na ihuenyo UI eserese izizi.
03. Nhazi ahụigodo – Họrọ okirikiri nhọrọ ukwuu ahụigodo. Nhọrọ, ị nwere ike ịnwale ma chọpụta nhazi ahụigodo site na ịpị ụfọdụ mkpụrụokwu; Otú ọ dị, ọ ga-adị ngwa ngwa iji aka họrọ.
Ozugbo emere, pịa “Nọgide” bọtịnụ.
Ọmụmaatụ (Bekee US ahọpụtara):
04. Mmelite na ngwanrọ ndị ọzọ - Mmelite na ihuenyo ngwanrọ ọzọ ga-apụta ọzọ. Nke a bụ akụkụ ebe ị nwere ike iwunye nrụnye ọkọlọtọ na etinyere ngwa niile akwadoro, ma ọ bụ ntakịrị maka obere bloating, yana faịlụ isi os naanị.
Dabere na ngwaike gị na akụrụngwa ga-emetụta nhọrọ gị. Site na ndabara, a na-akwado nwelite nbudata na kwesịrị ịhapụ ya ka ị na-etinye ya, n'ihi na a ga-etinyekwa mmelite nchekwa ọ bụla ngwa ngwa.
Ndị ọkwọ ụgbọ ala nke atọ bụ nhọrọ. Ụfọdụ n'ime ndị ọkwọ ụgbọ ala bụ sọftụwia nwe ya na-abụghị nke mepere emepe, nke ụfọdụ ndị ọrụ anaghị akwado. Nkezi onye ọrụ agaghị adị mkpa.
05. Ụdị ntinye - Maka nkezi onye ọrụ, họrọ "Hichapụ diski wee wụnye Ubuntu."
Agbanyeghị, maka ndị ọrụ chọrọ ntọlite ​​​​karịrị elu, ị nwere ike họrọ “Njirimara dị elu..” ka ịhọrọ ZFS, nke nwere ike na-achọsi ike.
The "Ihe ọzọ" bụ maka ịmepụta partitions. Ọtụtụ ndị ọrụ agaghị achọ iji nhọrọ ndị a. Naanị sysadmins ma ọ bụ ndị ọrụ ike bụ ndị maralarị nke ọma ins na outs ga-achọ ịhazi nhọrọ.
pịa "Wụnye Ugbu a" bọtịnụ ga n'ihu.
Tupu ịga n'ihu, ịdọ aka ná ntị ikpeazụ ga-apụta na-enye ndụmọdụ, "Dee mgbanwe na diski?". Nyochaa mgbanwe ndị edepụtara, lelee ugboro abụọ wee gbanwee ma ọ bụrụ na ezighi ezi.
Pịa “Nọgide” ịga n'ihu ma ọ bụrụ na ị nwere obi ụtọ na nhazi ahụ edepụtara.
05. Ebee ka ị nọ? - Haziri mpaghara oge. Site na ndabara, ekwesịrị ịhazi ya ka ọ bụrụ ebe ị nwere njikọ ịntanetị na-arụ ọrụ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbanwe ya, ị nwere ike ime ya ebe a, ndụmọdụ dị mma bụ ịpị maapụ.
06. Onye ka ị bụ? - N'akụkụ a, hazie aha gị, aha kọmputa na aha njirimara gị yana ịmepụta paswọọdụ. Nhọrọ, ị nwere ike hazie ịbanye na-akpaghị aka ma ọ bụ jiri paswọọdụ yana ndekọ na-arụ ọrụ. Maka ọtụtụ ndị ọrụ, a ga-ahapụ nhọrọ ndabara belụsọ.
07. Malitegharịa ekwentị PC - Mgbe ntinye ikpeazụ a gasịrị, nrụnye ga-agba ọsọ ruo ọtụtụ nkeji, dabere na ike nke usoro gị. Ozugbo echichi mechara, a ga-akpali gị ịmalitegharị PC gị ka ọ mechaa.
Mara, ị ga-ahụ n'okpuru mgbe mmalite. Ị ga-achọ iwepu draịvụ USB gị ma ọ bụ mgbasa ozi agbakwunyere wee pịa ya “Banye bọtịnụ” ka ịmalitegharịa sistemụ Ubuntu gị.
N'oge a, ị wụnyela sistemụ arụmọrụ. Akụkụ na-esote nke nkuzi ahụ na-ekpuchi oge mbụ edobere maka ndị ọrụ na-amaghị Ubuntu.
01. Banye na Ubuntu 21.10 Imish Indri - Ozugbo mmalite ahụ mechara, a ga-akpọrọ gị na windo nbanye gị ma ọ bụ banye na-akpaghị aka n'ime sistemụ gị dabere na nhọrọ ị họọrọ n'oge nrụnye.
02. Akaụntụ n'ịntanetị - Ozugbo ịbanye, usoro nke mbụ nke ihe ndị a ga-eme, na-ajụ ma ịchọrọ ijikọ akaụntụ ịntanetị ọ bụla. Enwere ike ịhazi nke a ma ọ bụ wụpụ wee gaagharịa ma emechaa.
pịa Kwuo " bọtịnụ ka ịga n'ihu ma ọ bụrụ na ị naghị edozi akaụntụ.
03. Nyere aka melite Ubuntu - Ịbanye ma ọ bụ pụọ na nsochi. Ọ bụrụ na ị maara ihe nzuzo, họrọ enweghị nhọrọ. Site na ndabara, ee ahọpụtara.
pịa "Osote" bọtịnụ ga n'ihu.
04. Nzuzo – Yiri nhọrọ ikpeazụ, ọ bụrụ na ị maara ihe nzuzo, hapụ ọrụ ọnọdụ.
05. Ị dịla njikere ịga! - Nhọrọ họrọ ngwa ndị ọzọ ewu ewu ịwụnye. N'ozuzu, nhazi oge mbụ ezuola.
pịa “Emela” bọtịnụ imecha ntọlite ​​​​.
06. Software Updater – Ọ bụrụ na ejikọrọ sistemu gị na ịntanetị, ị ga-ahụ mmapụta mara mma n'oge na-adịghị anya mgbe ịbanyechara iji wụnye mmelite. Nke a dị mkpa, ebe ọ bụ na a na-achọkarị mmelite nchekwa ka etinyere ngwa ngwa.
N'aka nke ọzọ, na ahụigodo gị, jide wee pịa (Ctrl+ALT+T) iji weta ọdụ Ubuntu wee jiri iwu na-esonụ lelee mmelite.
A ga-edepụta mmelite dị na njedebe. Ka ịga n'ihu na-emelite, jiri iwu na-esonụ.
ụdị "Y", pịa pịa "Tinye igodo" ịga n'ihu na nkwalite.
Ma nke ahụ bụ ya! Ị haziela nke ọma na melite Ubuntu gị na nhọrọ ịgba ọsọ nke mbụ, yana imelite Ubuntu 21.10 Imish Indri.
N'ime nkuzi a, ị mụtala ka esi etinye Ubuntu 21.10 Impish Indri site na nbudata, ịmepụta draịva bootable USB na ịwụnye sistemụ arụmọrụ, na ịtọlite ​​​​na ịhazi ngwa ngwa mbụ. N'ozuzu, Ubuntu 21.10 bụ nkwalite dị egwu site na 21.04, na nkwado Wayland ka mma na Gnome 40 mara mma na-ewebata.
Enwere ike ịchọta ozi ndị ọzọ na Ubuntu 21.10 Imish Indri site ilele ndetu ntọhapụ.
Otu esi etinye GNOME 41 Desktọpụ na-adịghị akwụ ụgwọ na Debian 11 Bullseye